Free Mac DVD gubi: Top 3 DVD Gubidda Software u Mac
Free Mac DVD gubi: Top 10 DVD Gubidda Software u Mac
DVD gubi u Mac
1. Free DVD gubi u Mac
2. Gubashada DVD on Mavericks
3. DVD G Mac
4. Play DVD on Mavericks
5. Samee DVD on Mavericks
6. DVDFab Alternative for Mac
7. DVDFab duwan oo loogu talagalay Mavericks
8. DVDFlick u Mac
9. DVD kasta oo lagu Mac
10. Download iDVD on Mac
11. CD gubi XP u Mac
12. Nero Alternative for Mac
13. Imgburn Alternative for Mac
14. DVDFab Alternative for Mac
Raadinta qalab free DVD gubashadii u Mac la sifooyinka DVD qaadashada la midka ah ee iDVD? Halkan Waxaad tahay. Maqaalkani waxa uu soo bandhigi doonaa 10ka gubidda DVD oo lacag la'aan ah oo leh waxyaabo fudud Mac OS X. Hel ugu fiican gubidda DVD oo lacag la'aan ah si aad u Mac hadda.
Qeybta 1: Top 10 DVD Creators FREE ah ee Mac
Qeybta 2: Xulashada More: a Professional & Xoog DVD Creator for Mac
Gubashada ayaa faa'iido sumcad balaadhan u gubanaya dhammaan noocyada files si DVD xogta gurmad ujeedada, ama playable CD / DVD. Xitaa Waxaad isticmaali kartaa inuu gubaa si ay Mac (libaax buurta taageeray) in aad nuqulka DVD files (.dmg, ISO, qorista / bin, iwm) Waxaa xitaa taageertaa qoraalka DVD fudud menu-dhexgal sida filimada DVD ganacsi. Waa xidhmo ee gubashada dhan-in-ka mid ah DVD sida ImgBurn for Windows , taas oo ah DVD il furan software gubanaya on SourceForge.
Badan oo ku saabsan Gubashada Baro >>
Inkastoo LiquidCD ee homepage waa kuwa is-hoosaysiiya, LiquidCD waa codsi DVD gubashada weyn oo lacag la'aan ah. Sida Gubashada, waxa kuu ogolaanayaa inaad si ay u gubaan ku dhawaad ​​kasta oo CD-yada iyo warbaahinta DVD. Luqado kala duwan yihiin oo ay taageerayaan: Ingiriisi, Faransiis, Jarmal, Isbaanish iyo Danish. Waxaa jira gole isticmaala inay weydiiyaan kana jawaabaan, laakiin waa in French. Booqo ka homepage of this Mac DVD gubi lacag la'aan ah.
Baro wax badan oo ku saabsan LiquidCD >>
Ha isku qaldin la Gubashada. BurnX waa gubi kale DVD lacag la'aan ah Mac iyo Windows ee ay HernanSoft. Iyadoo interface fudud oo user-friendly, BurnX kuu ogolaanaysaa inaad gubi playable CD / DVD by jiiday iyo tagtey files barnaamijka. Tani waxay la mid tahay Wondershare DVD Creator for Mac (El Capitan ka mid ah), kaas oo taageera waxayna jiidayeen iyo tagtey files si ay u gubaan DVD disc leh tayo sare leh. Dhammaan qaabab video caanka ah waxaa taageera, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn MP4, FLV, AVI, VOB, 3GP, 3G2, MOV, F4V, M4V, Mpg, MPEG, TS, TRP, M2TS, TP, DAT, wmv, MKV ASF,, mod, TOD iyo wixii la mid ah.
Baro wax badan oo ku saabsan BurnX >>
4: Si fudud Burns
Tani waa mid kale ma jiro oo aan DVD dareen gubi la interface fudud in ay ka shaqeeyaan. Codsiga bixisaa shaqeynta ee lagula qabsanayo warbaahinta, dooxeen, abuurista audio, cajalladaha xogta iyo sidoo kale gubanaya image ah oo mar horeba la xareynayo kombiyuutarka.
Badan oo ku saabsan Baro fudud Burns >>
5: Gubashada Express
Gubashada Express waa barnaamij kale oo la isku hallayn karo oo lacag la'aan ah Mac. Waxa aad taageertaa si ay u gubaan videos in Blu-ray, HD-DVD iyo sidoo kale images ISO. Interface user Waa wax fudud oo si dareen leh isla markiiba aad ogaan doontid sida loo isticmaalo arko hore.
Dheeraad ah ka baro Express Guba >>
6: cajalid gubi u Mac
Gubi Dis u Mac waa qalab gubashada dhan-in-mid video for Mac. Waxaa aad u saamaxaaya in ay abaabulaan jira, ku kaydi oo dhan content digital on disc iyo gubi in DVD iyo sidoo kale file ISO. Muuqaal kale oo waa weyn yahay in uu leeyahay fursad ay qaadan file image ka DVD drive si adag degaankaaga.
Badan oo ku saabsan cajalid gubi u Mac Baro >>
7: DVD Chocolate
Tani waa codsi ah kaas oo u ogolaanaya dadka isticmaala si ay u abuuraan files nuqul ka mid ah nooc kasta oo CD-yada. Waxay garan karaan ee CD-yada kuwaas oo aan la aqoonsan codsiyada kale X Mac OS. Waxaa loo isticmaali karaa si ay u gubaan SVCD iyo VCD iyo sidoo kale siisaa inay helaan muuqaalada qaar ka mid ah sida overburning. Tani waxay noqon kartaa qalab weyn oo loogu sawirrada cajalladaha gubanaya. Free in la helo halkan .
Baro wax badan oo ku saabsan Bombono DVD >>
Lugood waa barnaamij ay u gaar ah sida ay u saamaxaya kuwa isticmaala in ay ma ahan oo keliya gubi laakiinse inuu u yahay inuu abaabulo fudayd, wax iibsada, oo ciyaaro files warbaahinta. Marka laga reebo gubanaya, sifooyinka barnaamijka waxaa ka mid ah, ay muujinayso TV, Lugood Radio, filimada iyo Music inay DVD.
Baro wax badan oo ku saabsan Lugood >>
Finder kaliya ka gubtay DVD xogta disc. Waxaa laga heli karaa by default ee Mac taas oo ka caawisaa si ay u gubaan cajalladaha iyo ma u baahan tahay barnaamij xisbiga saddexaad. Tan waxaa la samayn karaa oo kaliya galinta disc ah in si SuperDrive ah. Dooro Open Finder on Window ah taas oo u muuqata shaashadda oo guji OK. Under Places DVD Untitled la baxshay karo. Hadda dadka isticmaala ku jiidi karaan jeedi files in la gubo oo liiska. Riix liiska ka dibna on doorasho Gubashada. Daaqad ilaa A ka muuqan doontaa oo user uu guji badhanka gubatay.
Badan oo ku saabsan Finder Baro >>
Baro wax badan oo ku saabsan iDVD >>
Qeybta 2: Xulashada More of a Professional & DVD Creator Xoog
Talinayo: Wondershare Video Converter Ultimate for Mac
Tani Wondershare DVD samaynta qalab aad u awood badan yahay All-in-mid Video xal qalab. Waa aalad wejiyo hawlaha ay awood badan dejiyeyaasha DVD kale oo ku saabsan suuqa. Sidoo kale waxaad noqon doontaa yaabeen ay xawaaraha ku gubanayso si degdeg ah oo tayo leh oo wax soo saarka DVD sare. Waxaa intaa dheer, waxa kale oo aad u bedeli karaan, edit, download, record, abaabulo oo loo daawado video in ka badan 150 qaabab leh qalabka.
Guba video dhow in qaab kasta, astaysto aad DVD la arrimo menu DVD oo lacag la'aan ah.
Edit, In kor loo qaado & shakhsiyeeyo Your Videos File.
Beddelaan in ka badan 150 qaabab jiraan 4K / 3D.
Download videos ka goobood oo kale la wadaago 1000+ video la One Click!
Si fudud u qoraan hoorto online videos
Streaming Media Your TV.
OS taageerayaan: Mac OS X 10.11 (El Capitan), 10,10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6, Windows 10/8/7 / XP / Vista
Sida loo Guba Video inay DVD la Wondershare Video Converter Ultimate for Mac (El Capitan ka mid ah)
Ku dar videos
Download iyo gashato, guji "gubi" on interface ka, ka dibna ku dar aad video files galay codsigan.
Codso in-dhisay arrimo Menu
Riix isbedel template on menu saxda ah si aad u dalbato in aad marto menu jecel. Samaynta DVD xirfadle weligii this sahlan.
Guba video inay DVD
Ka dib markii aad doorato templeat ah, ka dibna riix "Guba" badhanka si ay u bilaabaan si ay u gubaan DVD.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Sida loo Isticmaalo Wondershare Video Converter Ultimate for Mac
DVD gubi Windows 10: Sida loo Guba DVD ee Windows 10
Nero vs Roxio - Waa kuwee waa ka wanaagsan u DVD Gubidda?
5 siyaabo oo ku saabsan sida loo sawiro ka iPhone wareejiyo Mac
Sida loo isticmaalo Manager iPhoto Library
Guides: Sidee si ay u gudbiyaan Videos ka iPhone si Mac Mac iyo in iPhone
Sida loo Play MKV ee Mac OS X (Yosemite & Mavericks ka mid ah)
> Resource > Mac > Free Mac DVD gubi: Top 10 DVD Gubidda Software u Mac